मोतियाविन्दु दुर्गममा बढी- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
मोतियाविन्दु दुर्गममा बढी
असार १९, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — दुर्गम क्षेत्र, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय तथा महिलामा मोतियाविन्दुको समस्या अधिक छ । थोरै मात्रामा बालबालिका पनि यो रोगबाट पीडित छन् ।
समग्र जनसंख्याको करिब शून्य दशमलव २ प्रतिशत मोतियाविन्दुले ग्रस्त छन् । ६० वर्षमाथिका करिब आधाजति जनसंख्यामा यो समस्या छ । आँखाको लेन्समा सेतोपन देखिने भएकाले मोतियाविन्दु प्रभावितहरू राम्ररी हेर्न सक्दैनन् ।
‘मुलुकमा मोतियाविन्दुले अन्धै भएका करिब १ लाख र यो रोगले छोएका ५–६ लाख हुने आकलन गरिन्छ,’ तिलगंगा इन्स्टिच्युट अफ अप्थेल्मोलोजीका कार्यकारी निर्देशक डा.सन्दुक रुइतले भने । उनले करिब १ लाख २० हजार मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरिसकेका छन् । सन् २०१०–११ मा भएको सर्वेक्षणले मुलुकको ०.३५ प्रतिशत जनसंख्यामा अन्धोपन रहेको देखाएको छ । सम्पूर्ण अन्धोपनको करिब ६५ प्रतिशत कारण मोतियाविन्दुलाई नै मानिएको छ ।
उमेरसँगै लाग्ने यो रोग घाममा बढी बिताउने, घरीघरी झाडापखाला भएर शरीरमा असन्तुलन भएका, मधुमेह भएका र अन्य औषधि सेवन गर्नेहरूमा बढी देखिन्छ । घरभित्रको वायुप्रदूषणले समेत यो समस्या हुन सक्ने अध्ययनहरूमा देखिएको छ ।
मोतियाविन्दुको शल्यक्रियालगायत आँखाको उपचार सेवा छिमेकी मुलुकको दाँजोमा नेपालमा अझ राम्रो रहेको औंल्याउँदै डा. रुइतले साधारण तरिकाले शल्यक्रिया गर्दा करिब २ हजार रुपैयाँ र अन्य प्रविधि जोडेर गर्दा करिब ९–१० हजार लाग्ने गरेको बताए ।
मोतियाविन्दुको शल्यक्रियापछि आँखामा लाग्ने लेन्स नेपालमै उत्पादन हुनुका साथै सस्तो भएकाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहज भएको छ । नेपाल यो लेन्स उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ ।
नन फोल्डेबल (मोड्न नसकिने) लेन्सको मूल्य ३ सय र फोल्डेबल लेन्सको मूल्य १३ सयजति पर्छ । बच्चाहरूमा हुने जन्मजात मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया भने अर्कै खालको प्रविधिले गरिन्छ । बच्चामा हुने मोतियावन्दुको कारणसमेत थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ ।
‘बच्चामा टेडोपन देखियो, जन्मेको केही पछि उसको आँखामा प्रकाश पर्दा गाह्रो अनुभव गरे तुरुन्त देखाउनुपर्छ,’ डा. रुइतले भने । तिलगंगाका प्रोजेक्ट म्यानेजर मोहनकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मुलुकमा हाल दुई लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा मोतियाविन्दुको समस्या छ । मोतियाविन्दुमा आँखाको दृष्टि बिस्तारै कम हुन थाल्छ र धमिलो देखिन्छ । यसमा कुनै दुखाइ हुँदैन । घाममा चस्मा लगाउँदा मोतियाविन्दुको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०८:५२